Shiinaha Fused Silica Soo-saare iyo Burburiye | Dinglong
Burkeenna silica ee la shiilay waxaa laga sameeyay silica saafi ah, iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad isku dhafan oo gaar ah si loo hubiyo tayada ugu sareysa. Degganaanta mugga sare, ballaadhinta miisaanka oo hooseeya iyo daahirnimo sarreysa ayaa ka dhigaysa wax aad u faa'iido badan oo dhinacyo badan leh. Burkeenna silica ee la shiilay ayaa laga heli karaa cabirrada walxaha caadiga ah iyo kuwa loo qaybiyo.
Guryaha ballaarinta kuleylka hoose waxay bixiyaan iska caabin heerkul sarreeya
Waxaa laga heli karaa cabirrada walxaha caadiga ah iyo kuwa caadiga ah iyo qaybinta
Dinglong Fused Silica Flours waxaa loo isticmaalaa qaab jilicsan waxayna ka mid yihiin tayada ugu sareysa ee laga helo suuqa. Burkeenna silica ee la shiilay ayaa loogu talagalay isugeyn laga bilaabo Dufcaddii ilaa Dufcaddii, si lagaaga caawiyo inaad soo saarto qaybo leh heer sare oo sax ah cabbir ahaan. Dinglong budada silica ah ee la shiiday ayaa ah bur aad u daahir ah oo loo isticmaalay geedi socodka duqeynta tuugada maalgashiga, iyo waliba codsiyada diidmada iyo elektaroniga. Naqshadeynta foornada kacaanka waxay ka caawineysaa ka hortagga ciidda silica ceyriinka inay wasakhoobaan inta lagu guda jiro howsha - taasoo keentay wax soo saar dhammaaday oo ah 99.98% saafi ah.
Dinglong budada silica ah ee isku dhafan ayaa laga heli karaa labadaba qiyaasta cabbirka caadiga ah iyo qaybinta, iyo khabiiradayada ayaa kula shaqeyn doona si loo hagaajiyo codsigaaga. Sababtoo ah xarun kasta waxay leedahay shuruudo kala duwan, budadahan silica ah ee la isku dhajiyay waxaa lagu farsameeyay dabacsanaan lagu dhisay oo lagu hagaajin karaa baahiyaha dalabka gaarka ah. Dinglong fused silica flores waxaa laga heli karaa 2,200 lbs. (1,000 kg) jawaano cufan.
Qalabkan silica ee la isku daray waxaa lagu soo saaray xarun la xaqiijiyay oo ku taal Lianyungang, Shiinaha. Waxaan si buuxda isugu dhafnay si loo hubiyo in si buuxda loo xakameeyo tayada iyo sharafta qalabkeena quartz laga soo bilaabo miinada ilaa macaamilka. Waxaan leenahay in ka badan 30 sano oo waayo-aragnimo ah qaabeynta iyo soo saarista qalabka quartz-ka, isla markaana si joogto ah uga shaqeyno hagaajinta qalabkayaga quartz iyadoo lala kaashanayo macaamiisheenna.
Hore: Budada silica budada ah
Xiga: Buro Silica ah